နှစ်သစ်ကူး အမှတ်တရ စကားများ | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| April 12, 2012 | Hits:3,936
8 | | ယခုကဲ့သို့သော အတာ သင်္ကြန် မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူး ကာလတွင် ထင်ရှားသူတချို့၏ လာမည့် နှစ်သစ်အတွက် မျှော်လင့်ချက် ဆန္ဒနှင့် ခံစားမှုအမြင်များကို ဧရာဝတီကဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
သင်္ကြန်ကို ကျနော် မန္တလေးက Alpine မဏ္ဍပ်မှာရှိမှာပါ။ သင်္ကြန်ခံစားချက်ကတော့ ကမ္ဘာမှာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာပဲရှိတဲ့ Water festival ပေ့ါ၊ ဒီလိုပွဲတော်ကြီးရှိတဲ့အတွက် အရမ်းလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ ၀မ်းလည်းသာပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကို အရမ်းလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ နှစ်သစ်ဆုတောင်းအနေနဲ့ကတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ခေတ်တွေ စနစ်တွေလည်းပြောင်းသွားပါပြီ။ မူတွေလည်းပြောင်းသွားပါပြီ။ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးတွေ ပြောင်းဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်။ ကျနော်အပါအ၀င်ပေ့ါ၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ရှိကြတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံး ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း လမ်းကြောင်းကို ချီတက်နေတဲ့ နေ ရာမှာ မှားယွင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ အကျင့်ဆိုးလေးတွေကို ဒီနှစ်သင်္ကြန်နဲ့အတူအားလုံး ဆေးကြော ပြီးတော့ နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုကြ ပါစို့ လို့ပြောချင်ပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ခေါင်းဆောင်
သင်္ကြန်မှာတော့ ကျနော်က လိုချင်တာက ပိတောက် ရနံ့တွေ၊ မုန့်လုံးရေပေါ်တွေ တင်မကဘူး။ ဒီထက် အဓိက အရေးအကြီးဆုံး က သံချပ် အသံတွေပဲ။ ဒါက ပြည်သူလူထုရဲ့ ဘ၀တွေ၊ ပြည်သူလူထု တနှစ်တာလုံးလုံး ခံစားခဲ့သမျှကို ဖော်ထုတ်တဲ့ သံချပ်တွေမပါဘဲနဲ့တော့ သင်္ကြန်ဟာ မပြည့်စုံဘူးလို့ပဲ ခံစားရတယ်။ ကျနော့် အနေနဲ့ ထောင်ထဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ထောင်ပြင်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ သံချပ်ဆိုတာ ပြည်သူ့ဘ၀ ရင်ခုန်သံပဲ။ ကျနော်တို့ မီလိုက်မိသမျှကာလ တလျှောက်လုံး သင်္ကြန်ဟာ သံချပ်မပါရင် အသက်ဝိဉာဉ် မပါသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ ပြည်သူရဲ့ ဘ၀ကြေးမုံ အသံမပါဘဲနဲ့ သင်္ကြန်ဟာ ဘယ်လိုလုပ် အသက်ဝင်မှာလဲ။
မြန်မာရိုးရာသင်္ကြန်ကတော့ ကလေးတွေအတွက်ကတော့ ပျော်ဖို့အတွက်နဲ့ လူကြီးတွေကတော့ သီလယူ ဥပုပ်စောင့် တရားထိုင်ဖို့အတွက်ပေ့ါလေ။ ထက်ထက်တို့ကတော့ အနုပညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက် အနုပညာအလုပ်ကို လုပ်နေတော့ ဒီနှစ်မှာက မန္တလေးက မြင်းမူဘက်မှာ၊ သင်္ကြန် ၅ရက်ကို မန္တလေးမှာနေပြီးတော့ မနက်သွား ညပြန်ပေ့ါ၊ ဖျော်ဖြေရေးသွားရမှာပါ။ ဒီနှစ်သစ်ကနေ စပြီး အရင် က စိတ်ညစ်ခဲ့ရတာတွေ အဆင်မပြေမှုတွေအားလုံး ကင်းဝေးပြီးတော့ အပူအပင်တွေငြိမ်းအေးပြီး ကျန်းမာကြပါစေ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေကော ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ကိုရော ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်လို့..။
သင်္ကြန်ကျရင်တော့ ပျော်တာပေ့ါဗျာ။ အသက်တွေလည်းကြီးတော့ အသိဉာဏ်တွေလည်း တိုးလာတာပေ့ါ။ မကောင်းတာကို ကောင်း တဲ့စိတ် မွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ပြုပြင်စရာရှိတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုလည်း ပြုပြင်တယ်။ သူများကိုလည်း ပြုပြင်ဖို့ပြောတယ်။ သင်္ကြန်သံချပ် အလှကားထွက်မယ်။ အဲ့ဒါကိုကြိုစားကြတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ဘဲနဲ့ ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ ကောင်းသောအသိတရား ကောင်းသော အပြုသဘောတွေ ပြောကြမယ်။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများ ကျန်းမာကြပါစေ။ မြန်မာတွေဟာ ချစ်စရာကောင်းသော ဓလေ့ကိုဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာ မေတ္တာတရား ရှေ့မှာထားကြတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မြန်မာပြည်နဲ့တကွ တကမ္ဘာ လုံးမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ။ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးချင်တယ်။ ကျန်းမာပါမှ အခြားသော လုပ်ငန်း များ လုပ်လို့ရမယ်။ နောက် စိတ်ကောင်းတွေ မွေးနိုင်ကြပါစေလို့အတ္တကြီးတဲ့စိတ်တွေ ပယ်ပျောက်ပြီး သဘာဝလောကလူသားများ ပရအကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့လိုပဲကျင့်ကြံအားထုတ်ပါမယ်။
ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်
သင်္ကြန်ကတော့ ကျမတို့ မြန်မာတွေရဲ့ ရိုးရာ အထင်ကရ ပွဲတော်ဆိုတော့ ကျမတို့အားလုံး ရင်ခုန်ပြီး ပျော်ရွှင်ရတဲ့ တန်ဖိုး ထားရ တဲ့ ပွဲတော်တခုပါ။ ဒီနှစ်ကိုတော့ မန္တလေး Alpine မဏ္ဍပ်မှာ သီချင်းဆိုမှာပါ။ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာပြီး အန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သင်္ကြန်ကိုတော့ အေးအေးဆေးဆေးလေးနေမယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မျှော် လင့်လို့ရသမျှ အကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေ ခင်ဗျာ။
သင်္ကြန်ကတော့ စာမူတောင်းတဲ့သူတွေ ဟောပြောပွဲတွေမရှိဘူးဆိုတော့ နားရတာပေ့ါ။ အခုတော့ နိုင်ငံတကာက သိတဲ့ မြန်မာပြည်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ နိုင်ငံတကာမှာ တန်းဝင်တဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်လာပါစေလို့ နှစ်သစ်မှာ ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဗျာ။
သင်္ကြန်ကတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ နှစ်သစ်ကူးပေါ့။ တချို့ အယူအဆကတော့ နှစ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးတွေကို သင်္ကြန်ရေ နဲ့ ဆေးကြောတယ်ပေ့ါ။ ဘာပဲပြောပြော လူတွေက သင်္ကြန်ရေပက်လိုက်ရပြီဆိုရင် စိတ်ကျေနပ်မှု တစုံတရာ ရသွားတာပေ့ါ။ ဒီနှစ် သင်္ကြန်ကိုတော့ သျှီ သီချင်းမဆိုဖြစ်ပါဘူး။ သျှီ သီချင်းဆိုတာ ၁၅ နှစ် သက်တမ်းရှိပြီ။ ဒီနှစ်မှာတော့ ထူးထူးခြားခြားပေ့ါ သီချင်း ဆိုဖို့ ပြောပြီးဆိုပြီးတာတွေက နည်းတမျိုးမျိုးနဲ့ ရှောင်ထွက်သွားတာတွေက ထူးခြားမှုပေ့ါနော်။ အနုပညာအရ ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ် တွေ နဲ့ ထိတွေခွင့်မရတဲ့အတွက် ဆုံးရှုံးမှုတခုလို့တော့ ယူဆမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီသင်္ကြန်အတွက် ၀မ်းမနည်းပါဘူး။မြန်မာပြည် အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အကောင်းတွေဖြစ်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ပြည်သူတွေလည်း ပင်ပန်း နေပြီလေ။
ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာတော့ ထူးထူးခြားခြားပေ့ါ၊ ကျနော်တို့ တနိုင်ငံလုံး အပျော်ပေါ် အပျော်ဆင့်ပြီးတော့ ဆင်နွှကြမယ်လို့ ထင်တယ်။ အဲ့ဒီအတွက် အရမ်းပျော်ပါတယ်။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ သီချင်းဆိုခွင့်မရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၀မ်းလည်းမနည်းပါဘူး။ လုပ်သင့် လုပ် ထိုက်တာလေးကို လုပ်လိုက်ရတယ်။ လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ရလာတဲ့ အပေါင်းရလဒ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အနှုတ်ရလဒ်ပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ခံနိုင် တယ်။ သင်္ကြန်မှာ ကိုယ်ပါဝင်ရေး မပါဝင်ရေးနဲ့တော့ မဆိုင်ဘူး။ တနိုင်ငံလုံးကတော့ ဒီသင်္ကြန်မှာ အပျော်ပေါ် အပျော်ဆင့်ပြီး အားလုံး ပျော်ကြမှာပါ။ သင်္ကြန်တွင်းကို ရန်ကုန်မှာပဲရှိမယ်။ တချို့ရက်တွေ အမေ့ခြံထဲသွားမယ်။
ဒီနှစ်သင်္ကြန်ကတော့ အိမ်မှာပဲရှိမယ်။ ခါတိုင်းနှစ်တွေကတော့ သီချင်းဆိုတာများတဲ့အတွက်ကြောင့် သူများတွေလိုသိပ်မပျော်ရဘူး ပေ့ါ။ သီချင်းဆိုတာနဲ့ပဲ သင်္ကြန်ကို ဖြတ်သန်းတာများပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက သင်္ကြန်ကတော့ ပိုပျော်တာပေ့ါ။ မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းအလဲဆိုတာကတော့ ဘာကိုပြောင်းလဲတယ်လို့ ပြောလဲမသိဘူး။ ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ သိပ်အများကြီးတော့ မတွေ့ရသေး ဘူး။ ဥပမာ တလောကမီးတွေ တအားပျက်တယ်။ ပြည်သူတွေက နည်းနည်းပါးပါးပြောလိုက်တော့မှ အခုမှ ပြန်လာတယ်။ တကယ်တော့ ဒါတွေက မဖြစ်သင့်တော့ဘူးပေ့ါ။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာလည်း NLD အောင်နိုင်ရေးအတွက် လိုက်ပါခဲ့တဲ့ တချို့ အဆိုတော် တွေ သီချင်းဆိုခွင့်မရဘူးတွေလည်း ကြားနေရတယ်။ အဲ့ဒါမျိုးတွေကြောင့် စောင်ကြည့်ရပါဦးမယ်။ ပြောင်းလဲပြီလို့တော့ မခံယူရဲသေးပါဘူး။ ဘယ်သူမှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရဘဲနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့ နှစ်သစ်ကို ကူးပြောင်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီနှစ်သင်္ကြန်ကတော့ ခါတိုင်းနှစ်သင်္ကြန်တွေနဲ့မတူ ထူးခြားနေတာကတော့ လူရွှင်တော် နှုတ်ခမ်းမွေး ပါပါလေး ဦးဆောင်တဲ့ သင်္ကြန် သံချပ်အဖွဲ့ ထွက်တယ်ဗျာ။ ကဗျာဆရာတွေ စာရေးဆရာတွေပါဝင်တဲ့ သံချပ်အဖွဲ့လည်း ထွက်မယ်ဗျာ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ကတော့ ရေကစားကြတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေလိုက်ရိုက်ဖြစ်မယ်။ ကျနော်ရေးလက်စ စာတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒါတွေ ဆက်ရေးဖြစ်ပါမယ်။ ဒီနှစ် ကျနော် ရထားတဲ့ လက်ကမ်းကြော်ငြာတွေထဲက ရေကစားမဏ္ဍပ်တွေက သုံးသောင်းခွဲတန်လည်း ရှိတယ်။ တယောက်ကို လေး သောင်းခွဲ ဆိုတာလည်းရှိတယ်။ အကျနေ့မှာ ငါးသောင်း၊ အကြတ်နေ့မှာ နှစ်သောင်း၊ အတက်နေ့မှာ နှစ်သောင်းခွဲဆိုပြီးတော့ ရှိတယ် ဗျ။ ဒီဂျေ တွေနဲ့ ရေကစားရမယ်လို့ ရေးထားပါတယ်ဗျ။
ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ ဒီလို သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း အမေ့ကို သတိရ တယ်ဗျာ။ အမေက ခေတ်လူငယ်တွေ ၀တ်ကြစားကြ ပျော်ကြ ပါးကြတာ အလွန်အကျွံတွေကို အမေက စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ အမေက အဲ့လောက်ကြီးတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ ဆိုတာမျိုးကို ရေးစေချင်တယ်ဗျ။ အမေသာရှိမယ်ဆိုရင် အခုခေတ် သင်္ကြန်ကာလမျိုးကိုသာ မြင်ရင် ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာ အမေ့ကို တမ်းတ မိတယ်ဗျ။ အရက်တွေ ဘီယာတွေ ဖောဖောသီသီနဲ့ ပျော်ကြဖို့ ပြင်နေတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဗျ။ ကျနော်တို့ ညီတွေ အစ်ကို တွေ မိတ်ဆွေတွေ အထဲမှာရောက်နေတာ၊ ပြန်လာဖို့ ကောင်းတဲ့ ပညာရှင်တွေ အဝေးမှာရောက်နေတာ၊ ချစ်သူခင်သူတွေ ပြန် ဆုံစည်းရရင်ကောင်းမှာပဲလို့၊ တကယ်တိုးတက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ဖို့တော့ အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးပြီး အားလုံးပြန် လာနိုင်ကြစေချင်တာ၊ အဲ့လိုဆုတောင်းပေးချင်တာဗျာ။ အဲ့ဒီလို ကျနော်တို့ တောင်းတဲ့ဆုသာ ပြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မလဲ ဆိုတဲ့ နှစ်သစ်ဆုတောင်းစကား ပြောချင်တာပါဗျာ။
ဒီနှစ်သင်္ကြန်ကိုတော့ ငွေဆောင်မှာရှိပါမယ်။ နှစ်သစ်မှာ လူသားအားလုံး လိုအင်ဆန္ဒနဲ့ စိတ်ရဲ့ ဆန္ဒ တထပ်တည်း ကျပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
လူရွှင်တော်၊ သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ
သင်္ကြန်မှာ အလှကားထွက်ပြီးတော့ သံချပ်ထိုးဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ သင်္ကြန်ကတော့ ကျနော့် ဘ၀ပါပဲ။ သံချပ်တွေ ထိုးခွင့်မရလို့သာ မထိုးကြတာလေ။ ထိုးခွင့်ရလို့ကတော့ ထိုးမှာပါ။ အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာစွာနဲ့ စိတ်သစ်လူသစ်တွေနဲ့ ဆက်ပြီး တော့ သွားကြရအောင်လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အလုပ်သမား လုပ်ခလစာ ဥပဒေ မရှိသေးဘူး
“လူငယ်တွေဟာ ယနေ့ကစပြီး ခေါင်းဆောင်မယ့် သူတွေ”
15 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Zero April 12, 2012 - 3:29 pm	Khat Si Thu, R u sure that myanmar is the only country that has or celebrates water festival? 🙂 I think some regions of Thailand also has water festival..
Reply	့honey April 12, 2012 - 9:46 pm	တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့
Reply	ma chwe ma April 13, 2012 - 5:47 am	ခန့်စည်သူကို ပြောလိုက်ပါ ယိုးဒယားက water festival နဲ့လုပ်စား ဆယ်စုနှစ် လေးခုမကတော့ဘူးလို့၊
Reply	Kenneth April 17, 2012 - 11:50 pm	Right!! Poor knowledge.
Reply	ring April 13, 2012 - 5:16 pm	အပေါ်က ခန့်စည်သူ ဆိုတဲ့ငနဲ
စာဖတ်ပါဆို ရုတ်ပုံဘဲ ကြည့်တာကိုး။
လေ့လာပါဆို ရိုက်ကွင်းတွေပဲသွားပြီး ဖွန်ဘဲကြောင်နေတာကိုး။
လေ့လာလိုက်အုံးငနဲ အော် မဟုတ်ဘူး ငနဲလေးရေ
Reply	lwinpyin April 13, 2012 - 9:57 pm	စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အနုပညာရှင်များ၊ အဆိုတော်များအတွက်…….
Reply	minkokyaw April 14, 2012 - 4:46 am	Khan Si Thu, Are you insane? Many countries play water for their new year festival.This guy is trying to change side from SPDC to NLD now, be careful our guys.
Reply	hell April 16, 2012 - 12:32 am	good job!!!
Reply	bo bo@ April 16, 2012 - 9:13 am	khant sei thu need more knowledge,,should not say things without learning,,now everyone know how dump he is,,,,
Reply	ဖုန်ဆာရ်း kl April 16, 2012 - 12:48 pm	အနုပညာရှင်တွေအားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ ပြည်သူအတွေလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အဆိုတော်များ အနုပညာရှင်များအာလုံးကိုလောကကြီးကောင်းကြီးပေးပါစေ…….စာရေးဆရာညီပုလေး ရဲ.ခံစားချက်နဲ.ကျွန်တော်ခံစားချက်က တထက်ထဲကျနေပါတယ်လို.ပြောချင်ပါတယ် အဝေးရောက် မြန်မာ…………
Reply	pn wara April 17, 2012 - 2:34 pm	ခန့် စည်သူ ရေ- ကမ္ဘာအပြင်မထွက်နိုင်လျှင်တောင် အိမ်နီးနားခြင်းနိုင်ငံတွေမှာလဲ မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ ထပ်တူကျတဲ့ water festival ရှိတယ်ဆိုတာလောက်တော့ လေ့လာထားပါကွာ- မင်းက သရုပ်ဆောင် မင်းသား မဟုတ်လား။
Reply	Sann Win April 17, 2012 - 2:37 pm	Khant See Thu is Awarded Star in Myanmar. Seems he does not have any general knowledge. There are many countries in South East Asia, celebrating water festival. How shame, military regime backed actor. He does not have any knowledge…..ခန့်စည်သူဟာ အနုပညာရှင်ဆု ချီးမြင့်ခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ စတား တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာတော့ထိုက်သင့်တဲ့အရည်အချင်းရှိသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရတာ အထွေထွေဗဟုသုတမရှိတဲ့မင်းသားပါပဲ။ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ခေတ်သစ်မင်းသားပါကလား။
Reply	ကောင်းအောင် April 17, 2012 - 5:18 pm	အေးကောင်းပါတယ်။ ကျွဲခတ်ရာမှမြေဇာပင်များ အ
Reply	Sao Khun wan April 18, 2012 - 7:31 am	You all have to unite to formaUnion for your celebs and then with other unions (genuine) not mislead by USDP and finally to be come A Union of Myanmar. A Very Happy New Year.
Reply	ကိုကို April 18, 2012 - 9:19 am	ခန့်စည်သူရေ သင်္ကြန်ကဗမာပြည်တစ်ခုထဲမဟုတ်